Taageerayaasha Barcelona oo helaya war aad u fiican kahor kulanka ay la dheeli doonaan Granada – Gool FM
Taageerayaasha Barcelona oo helaya war aad u fiican kahor kulanka ay la dheeli doonaan Granada
Dajiye January 15, 2020
(Barcelona) 15 Jan 2020. Taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa helaya war aad u fiican kahor kulanka ay la ciyaari doonaan Granada.
Xiddiga khadka dhexe reer Brazil ee Arthur Melo ayaa ka qeyb galay tababarkii shalay oo Talaado ah ay sameysay kooxda Barcelona, kaddib muddo dheer uu ku maqnaa dhaawac dartiis.
Waxaa la filayay in Arthur Melo uu garoomada ka sii maqnaan doono mudo labo Isbuuc kale, sida ay shaacisay Barcelona inta lagu gudi jiray toddobaadyadii lasoo dhaafay.
Laakiin xiddiga khadka dhexe reer Brazil ee Arthur Melo ayaa ku soo laabtay shalay tababarka Barcelona, wuxuuna qeyb ka noqday tababarkii ugu horeeyay uu bixiyay macalinka cusub ee kooxda Quique Setien.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Sport” ee dalka Spain Arthur Melo ayaa wuxuu dhameystay cashirkii tababarka uu bixiyay tababare Quique Setien isagoo aanan ka cabanin wax xanuun ah, taasoo ka dhigeysa inuu diyaar u yahay kulanka Axada soo aadan ay kooxda Granada kula ciyaari doonaan horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Paul Pogba oo kusii dhowanaaya inuu isaga tago Kooxda Manchester United
“Tartankii aan la galay Cristiano Ronaldo wuxuu kusii jiri doonaa maskaxda dadka” – Lionel Messi